July 16, 2019 Cele Love 0
“အမျိုးသမီးတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ မအင်္ဂါ နာကျင်ရခြင်း အကြောင်းအရင်းများ” ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဗဟုသုတစာပေများကို မျှဝေပေးလျက်ရှိရာ အခုတခါ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတိပြုစရာအဖြစ် အမျိုးသမီးလိင်အင်္ဂါနာကျင်ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြပေးလိုက် ရပါတယ် ။ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ပုံမှန်အားဖြင့် ဓမ္မတာလာစဉ်ပျမ်းမျှ၅ရက်အတောအတွင်းမှာပဲမအင်္ဂါကနာကျင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခါတလေ တစ်စုံတစ်ရာထိခိုက်မိခြင်းမရှိပေမယ့် နာကျင်မှုခံစားရရင်တော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်နဲ့ပြသတိုင် ပင်သင့်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အခုဖော်ပြပေးမယ့် အချက်တွေကြောင့်လည်းမအင်္ဂါနာကျင်မှုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အတွက် […]
လူစည်ကားတဲ့ နေရာတွေ ကလေးငယ်များနှင့် သွားရင် သတိပြုကြပါ…
လူစည်ကားတဲ့ နေရာတွေ ကလေးငယ်များနှင့် သွားရင် သတိပြုကြပါ… မနေ့ညက၊ အင်းစိန်၊ အာလိမ်ငါးဆင့်ဘုရားက ကရင်နှစ်သစ်ကူး ပွဲဈေးတန်းကို မိသားစုနဲ့ လျှောက်ဖြစ်တယ် …။ သားအငယ်လေး (၂ နှစ်၊ ၅ လ အရွယ်)ကို ချီပြီးတော့၊ ဘုရားဝင်းထဲကို ဝင်မိတော့၊ လူတွေက တစ်အားကျပ်နေ ပါတယ် […]
ကိုယ့်အပေါ် မချစ်တဲ့သူကို စိတ်ထဲမှာ တိကနဲ ပြတ်အောင် အပြတ်ဖြတ်နည်း
ကိုယ့်အပေါ် မချစ်တဲ့သူကို စိတ်ထဲမှာ တိကနဲ ပြတ်အောင် အပြတ်ဖြတ်နည်း ကိုယ်ချစ်မိနေတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ဆီကနေ အငြင်းခံလိုက်ရ တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ကပဲ ချစ်နေရပြီး သူ့ဘက်က ပြန်မချစ်တဲ့ ချစ်သူတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင် ထားသူတွေအနေနဲ့ သူ့အပေါ်မှာ ထားတဲ့ စိတ်ကို ရအောင် ဖြတ်ပါလို့ အကြံပြု ချင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် […]
အမည်းစက်တွေ၊ အမာရွတ်တွေကို သက်သာစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း…
အမည်းစက်တွေ၊ အမာရွတ်တွေကို သက်သာစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း… အသားအရေပေါ်က အမည်းစက်တွေ၊ အမာရွတ်တွေကို သက်သာစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ …. ကြည်လင်စိုပြေတဲ့ အသားအရေကို လူတိုင်းလိုချင်ကြ မှာပါနော် … မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ အမည်းစက်တွေ၊ ဝက်ခြံကြောင့် ကျန်ခဲ့တဲ့ အမာရွတ်တွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေဖို့ နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ် […]
နီလန်းလို ဖြစ်ရပ်မျိုးလေး လူတိုင်းလူတိုင်း မကြုံရပါစေနဲ့လို့ ဝမ်းနည်းစရာ သီချင်းလေးနဲ့ ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ နီလန်း…
နီလန်းလို ဖြစ်ရပ်မျိုးလေး လူတိုင်းလူတိုင်း မကြုံရပါစေနဲ့လို့ ဝမ်းနည်းစရာ သီချင်းလေးနဲ့ ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ နီလန်း… မြန်မာအိုင်ဒေါ Season-3 ကတဆင့် လူသိများထင်ရှားလာတဲ့ နီလန်းဟာလည်း အချစ်ရဲ့ ထိုးနှက်မှုဒဏ် တချို့ကို ခံစားခဲ့ရပါတယ် ။ ပြိုင်ပွဲ ဝင်နေစဉ် ကာလအတွင်းမှာ ချစ်သူရဲ့ ကွယ်လွန်သွားမှု သတင်းဟာ နီလန်းလို […]
ဒီကနေ့ လပြည့်ည သန်းခေါင်ကျော် မှာ ရွတ်ဖတ် ရမည့်.. ဂါထာတော်
ဒီကနေ့ လပြည့်ည သန်းခေါင်ကျော် မှာ ရွတ်ဖတ် ရမည့်.. ဂါထာတော် ယနေ့လပြည့်ညသန်းခေါင်ကျော် မှာ… ရွတ်ဖတ်ရမည့်… ဂါထာတော်တပုဒ်ပါ …. ။ ယ​နေ့ လပြည့််ေ​န့ ညသန်း​​ခေါင်​ကျော်​ ( ၁၇/၇/၂၀၁၉ နံနက်​) ၂ နာရီ ၃၀ မိနစ်​ မှ […]
ရထားပေါ်မှာ ခုံနေရာမရလို့၊ အတွင်းခံဘောင်းဘီချွတ်ပြီးဆန္ဒပြတဲ့ အမျိုးသမီး – ရုပ်သံ
ရထားပေါ်မှာ ခုံနေရာမရလို့၊ အတွင်းခံဘောင်းဘီချွတ်ပြီးဆန္ဒပြတဲ့ အမျိုးသမီး -ရုပ်သံ တခုသော မော်စကို မြို့ပတ်ရထားတစင်းအပေါ်မှာ အမျိုးသမီးတယောက်ဟာ သူမကို ခုံနေရာမပေးတဲ့ အတွက်စကပ်အောက်က အတွင်းခံဘောင်းဘီကိုချွတ်ပီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ် … ။ သူမဆိုလိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ သူမကို အမျိုးသားတယောက်က နေရာမပေးလို့ပါ … ။ ဒါပေမယ့် […]
အထက် တန်းကျောင်း ထဲ လူမို က်အုပ်စု များ ဝင်ရောက်သောင်းကျန်းပြီး ကျောင်းသူများလေးကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှု(ရုပ်သံ)
အထက် တန်းကျောင်း ထဲ လူမို က်အုပ်စု များ ဝင်ရောက်သောင်းကျန်းပြီး ကျောင်းသူများလေးကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှု(ရုပ်သံ) ဘ န်ကောက်မြို့ ရှိ အထက်တန်းကျောင်းအတွင်း အင်းအား၃၀ကျော် လူမိုက်အုပ်စုဝင်များကဝင်ရောက်ဆီးနင်း ဖျက်ဆီး စာမေးပွဲဖြေဆိုနေကြသည့် ကျောင်းသူများပါ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံရ ဘန်ကောက်မြို့ အေကချိုင်းလမ်း က ဝပ်စင် အထက်တန်းကျောင်း စာမေးပွဲဖြေဆိုနေကြတဲ့အချိန်မှာ […]
စောင့်ထိန်းအပ်တဲ့ လူမှုစည်းကမ်းတစ်ခု ကိုပြောပြလာတဲ့ စိုင်းစိုင်း နဲ့ ချစ်သုဝေ ပြည်သူလူထုတွေကြားမှာ အရမ်းကို ဟစ်ဖြစ်နေတဲ့ ဗစ်တိုးရီးယားလေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အနုပညာရှင်များစွာက ၀န်းရံခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုဝန်းရံကြတဲ့ နေရာမှာ ချစ်သုဝေ နဲ့ လင်းလင်းတို့ ကတော့ အစွမ်းကုန်ကူညီခဲ့ကြသူတွေပါ။ ယနေ့မှာတော့ သမီးလေးနဲ့ ပတ်သက် တဲ့ သတိထားရမယ့် […]
ရဟတ်ကျိုးကျပြီး လူ ၂ ဦးသေဆုံးကာ ဒါဇင်နဲ့ချီဒဏ်ရာရ (ရုပ်သံ) ယခုနှစ်ပိုင်းမှာ အပျော်စီးရဟတ် ကျိုးကျတဲ့ သတင်းတွေ ခပ်စိပ်စိပ်ဆိုသလို ဖြစ်နေတာဖြစ်ရပါတယ်။ ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ က အိန္ဒိယနိုင်ငံ အမီဒါဘတ်ပြည်နယ် မှာရှိတဲ့ အပန်းဖြေ ဥယျာဉ်ထဲက အပျော်စီးရဟတ်ကြီး လူတွေတင်ဆောင်ကာ လည်ပတ်နေချိန် […]